मन्त्री र पूर्वमन्त्रीबीच पोल खोला-खोल, खुले यस्ता रहस्य – List Khabar
Home / समाचार / मन्त्री र पूर्वमन्त्रीबीच पोल खोला-खोल, खुले यस्ता रहस्य
मन्त्री र पूर्वमन्त्रीबीच पोल खोला-खोल, खुले यस्ता रहस्य
admin January 16, 2022 समाचार Leaveacomment 27 Views
काठमाडौ । अहिले सामाजिक सञ्जाल र युट्युवहरुमा एक जना पूर्वमन्त्री र वहालवाला मन्त्रीबीच पोल खोला खोल भएका सामग्री भाइरल भएका छन् । दुवै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन् । कुनै समय एउटै पार्टीमा रहेर सहकार्य गरेका नेताहरुबीच अहिले भने पोल खोला खोल भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा दुवै नेताहरुको आलोचना भएको हो ।
तर केही महिनाअघिसम्म एउटै पार्टी र एउटै गुटमा रहेका पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईबीच अहिले पोल खोला खोलको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । उनीहरु केही समयअघि नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाल रहँदा सम्म उनकै गुटमा थिए । नेपालले अर्को पार्टी गठन गरेपछि आले त्यता गएका हुन् भने योगेश एमालेमै छन् ।
अहिले नारायणहिटी संग्राहलयमा क्यान्टिन तथा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि भाडामा दिँदा तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले ‘कानुन मि चे को’ लागेपछि यो विषय लहरो तान्दा पहरो झरे झै भएको छ । मन्त्री आलेलाई भट्टराईले लण्डनबाट आउँदा १० बोतल र क्सी, रोलेक्स घडी, आइफोलनलगायतका सामग्री लिएर भीआईपी कक्षबाट बाहिरिएको भन्दै सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिए ।
उनले त्यती मात्र होइन त्यसदिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि आले पनि प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् । आलेले पनि तत्कालीन मन्त्री भट्टराईको कार्यकालमा भएको गतिविधिको छानबिनका लागि समिति नै बनाएका छन् । त्यतिमात्रै होइन योगेश भट्टराईले माओवादी द्व न्द्व का बेला ह ति यार सप्लाइ गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
यी दुवैले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा यस्तो आरोप लगाएका हुन् । “आफू १० बोतल र क्सी बोकेर भीआईपीबाट आउने, रोलेक्स घडी कतिवटा बोकेर आउने, आइफोन कतिवटा बोकेर आउने भीआईपीबाट आउने अर्कोले तीन बोतल र क्सी बोकेर आयो भनेर बबन्डर मच्चाउने ?,” भट्टराईले भनेका छन्, “म इमिग्रेसनलाई चुनौतीका साथ भन्छु जुन दिन पर्यटनमन्त्री लण्डनबाट फर्किएर आउनुभयो त्यो दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।”
उनले दोहा विमानस्थलमा मन्त्री आलेले किनेका सामग्री हेर्नका लागि उनको बोर्डिङ पास चेक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । “दोहा विमानस्थलमा के के किन्नुभयो । बोर्डिङ पास चेक गरौँ,” उनले मन्त्री ओलेलाई भनेका छन्, “उनी आफ्नो ठेगानमा बसुन् ठाउँमा बसुन् । आफू के हो कुन जमिन हो । कुन धरातलबाट आएको राम्रोसँग बुझ्नु । म काठ त स्क र गरेर आएको हो राजनीतिमा ? नेपालको हरियो वन भारततिर त स्क री गर्दैगर्दा म राजनीतिमा थिएँ । म सुनको त स्क री गरेर आएको हुँ ?”
भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि मन्त्री आले पनि प्रतिवादमा उत्रदै विभिन्न आरोप लगाएका छन् । भट्टराई मन्त्री हुँदा नेपाल एयरलाइन्सलाई भन्दा बढी हिमालय एयरलाइन्सलाई काम दिएको, निजीकरणका नाममा नेपाल एयरलाइन्सको जग्गालाई सस्तो मूल्यांकन गरिएको, कोभिडको बेलामा नेपाल एयरलाइन्सबाट ओम्नीको सामग्री बोकेको तर अहिलेसम्म भुक्तानी नगरिएको, माओवादी द्व न्द्व का बेला ह ति यार को सप्लाइ गरेको, मन्त्री नहुँदै व्यापारीसँग एक करोड रुपैयाँ माग गरेकोलगायतका आरोप लगाएका छन् । उनले यि सबै विषय अनुसन्धानमा रहेको हुँदा दो षी पाइए कारवाहीका लागि सिफारिस गरिने बताए ।
Previous ढोका नै नलगाई जब काठमाडौवाट पोखरा उड्यो जहाज… !
Next २९ वर्षपछि शिल्पा शेट्टी फेरि त्यहीँ पुगिन् जहाँबाट उनले आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन्